OLEE OTú IJI WỤNYE NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA NA MOTHERBOARD - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka motherboard
Na - arịwanye elu, ndị ọrụ kọmputa na - anwa ịwachi kọmputa ha na kọmpụta. Nke mbụ, ndị na-egwu egwuregwu na-amasị ya, mgbe ahụ, onye ọ bụla ọzọ chọrọ ịnweta mmemme. Imebiga ihe ókè bụ otu n'ime ụzọ ndị kachasị mma isi meziwanye arụmọrụ. Ụlọ ọrụ ahụ na-enyekwa ndị nwe AMD ọrụ iji ọrụ bara uru.
AMD OverDrive bụ programmụ n'efu nke na-enye gị ohere ịgbachi ihe nhazi AMD. Onye ọrụ ahụ nwere ike ịbụ onye nwe nne motherboard ọ bụla, ebe ọ bụ na usoro a dị oke mkpa na onye na-emepụta ya. Ihe niile na-amalite, malite na ogwe aka AM-2 nwere ike ịchichapụ ya na ike achọrọ.
Ihe omumu: Otu esi kpochie ihe ngosi AMD
Nkwado maka ngwaahịa niile nke oge a
Ndị nwe usoro AMD (Hudson-D3, 770, 780/785/890 G, 790/990 X, 790/890 GX, 790/890/990 FX) nwere ike ibudata usoro a site na saịtị ọrụ ahụ n'efu. Ejighị motherboard abụghị ihe. Tụkwasị na nke a, a pụrụ iji usoro a ma ọ bụrụ na kọmputa nwere obere ọrụ.
Window na-arụ ọrụ nke usoro ihe omume ahụ na-ezute onye ọrụ nwere ọtụtụ ọnụọgụ, ihe ngosi ndị dị mkpa maka ntaneti na nyocha. Ndị ọkachamara ahụmahụ ga-egosiputa nnukwu ọnụọgụ data nke usoro a na-enye. Anyị chọrọ ịdepụta naanị akụkụ ndị bụ isi nke usoro ihe a na-enye:
• nhazi maka nyochaa nyochaa nke os na PC;
• ozi zuru ezu banyere njirimara nke komputa kọmputa na ọnọdụ ọrụ (nhazi, kaadị vidiyo, wdg);
• ntinye iji dozie ihe PC;
• Nlekota oru nchịkọta PC: njirimara ncheta, voltages, temperatures na fan ọsọ ọsọ;
• ngbanwe ntụziaka nke ngwa ngwa, oke ọkụ, ọsọ ọsọ nke Fans, multipliers na ọnụ ọgụgụ nke oge ncheta;
• nyochaa nyocha (mkpa maka nchekwa overclocking);
• mepụta profaịlụ dị iche iche na ọkwa dị iche iche;
• CPU overclocking na ụzọ abụọ: na-akpaghị aka na na akpaghị aka.
Oge nlekota na ngbanwe ha
A kọwo okwu a na nkenke na paragraf mbụ. Ihe dị oke mkpa nke usoro ihe omume maka overclocking bụ ikike nyochaa arụmọrụ nke nhazi na ebe nchekwa. Ọ bụrụ na ị gbanwee Ozi System> Ihe ngosi ma họrọ mpaghara achọrọ, mgbe ahụ i nwere ike ịhụ ihe ngosi ndị a.
- Nyochaa Ọnọdụ ugboro ugboro, voltaji, ọkwa ọkwa, okpomọkụ na ịba ụba.
- Njikwa Perfomance> Novice Na-ekwe ka ihe mmịfe ahụ gbanwee ugboro PCI Express.
- Mmasị> Ntọala na-enye ohere ịnweta ụda ntụrụndụ dị mma site na ịgbanwere ọnọdụ dị elu. Ọ na-anọchi Njikwa Perfomance> Novice na Njikwa ntụpọ> Elekere / Voltage, ya na ndi obula ohuru.
Onye ọrụ ahụ nwere ike ịmalite ịrụ ọrụ nke onye ọ bụla ma ọ bụ otu mgbe.
- Njikwa Perfomance> Nchekwa egosiputa ozi zuru ezu banyere RAM ma nye gị ohere ịtọ oge.
- Njikwa nkwụsịtụ> Nnwale nke ike na-enye gị ohere iji tụnyere arụmọrụ n'ihu na mgbe ị gafechara ma chọpụta nkwụsi ike ahụ.
- Njikwa Perfomance> Nchekwa onwe na-enye gị ohere ịgbachi ihe nhazi ahụ n'ọnọdụ akpaka.
Uru nke AMD OverDrive:
1. Ọdịmma dị irè iji kpuchie nhazi ahụ;
2. Enwere ike iji ya dị ka ihe omume iji nyochaa arụmọrụ nke components PC;
3. A na-ekesa ya n'efu na ọ bụ ọrụ ọrụ sitere n'aka onye ọrụ ahụ;
4. Ime ihe banyere PC;
5. Akpaka na-ekpuchi;
6. Njikwa omenala.
Ihe ọghọm nke AMD OverDrive:
2. Ihe omume ahụ anaghị akwado ngwaahịa ndị ọzọ.
Hụkwa: Mmemme ndị ọzọ maka ihe na-akwado AMD processo
AMD OverDrive bụ usoro dị ike nke na - enye gị ohere iji arụ ọrụ nke PC gị. Site n'enyemaka ya, onye ọrụ ahụ nwere ike ịmị mma-nụ, nyochaa ihe dị mkpa ma mee nyocha arụmọrụ na-enweghị mmemme ndị ọzọ. Na mgbakwunye, enwere mkpuchi maka ndị chọrọ ịchekwa oge na overclocking. Enweghị Rizos anaghị ewe iwe na-ewe oké iwe, ebe ọ bụ na interface ahụ bụ ihe omimi, okwu ndị a kwesịrị ịmara ọbụna onye na-amu amu.
Download AMD Overdrive n'efu
Anyị na-ekpuchi usoro AMD site na AMD OverDrive CPUFSB Igwe elekere AMD CPU overclocking software
AMD OverDrive bụ mmemme maka chipsets AMD ka mma iji meziwanye ọrụ nke igwe ọrụ.
Onye Mmepụta: George Woltman